देशको पक्षमा बोल्दा कारवाही गर्ने ? म डराउँदिन सत्य बोलीनैरहन्छु – क्याप्टेन लामा ( भिडियो सहित ) – ThikThak News
May 3, 2019 - LeaveaComment
स्पस्ट बक्ता र खरो रुपमा बोल्दै आएका नेपाल एयरलाइन्सको वरिष्ठ पाइलट विजय लामाले आफ्नो गुनासो पोखेका छन्। केहि दिन अघि मात्र उनलाई नेपाल एयरलाइन्सले आफ्ना प्रवक्ताको जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिएको थियो। जुन कुरा विज्ञप्तिमार्फत् जानकारी गराइएको थियो । बिजय लामाले एक अन्तर्वार्तामा दिएको अभिव्यक्ति कारण उनलाई प्रबक्ता बाट मुक्त गरिएको थियो। यसै सम्बन्धमा बिजय लामाले आफ्नो गुनासो पोखेका छन्। देशको पक्षमा बोल्दा कारवाही गर्ने ? म डराउँदिन सत्य बोलीनैरहन्छु भन्दै अन्तर्वार्तामा आफ्नो अभिव्यक्ति दिएका छन्।
यसअघि आजै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले लामालाई दोहोरो भूमिका दिँदा सुरक्षा खतरा बढेको भन्दै दोहोरो पदमा रहुञ्जेलका लागि उडान अनुमति नदिने भन्दै त्यसको जानकारी नेपाल एयरलाइन्सलाई गराएको थियो । वरिष्ठ पाइलट विजय लामाले नेपाल एयरलाइन्समा क्याप्टेनका रुपमा उडान भर्दै आएका थिए । आफु देशको लागि बोल्दै आएको र देशको भलाइ का लागि बोल्न कहिले पनि नरोकिने भन्दै उनले बताएका छन्। आफुले नेपाल एयरलाइन्सको सधै भलाइ चाहेको र एयरलाइन्सको भलाई कै लागि सधै लागि रहने उनले बताए।
आफुले बोलेको कुरालाई अतिरन्जित बनाएर सोचिएको क्याप्टेन बिजय लामाले बताए। आफुले कसैलाई नराम्रो नभनेको र कसैले गरेको गल्ति उजागर गर्नु आफ्नो गल्ति नभएको उनले अन्तर्वार्ता मा बताए। नेपाली दाजुभाइले त्यस दिन जहाज ढिलाई हुदा पाएको दुख बारेमा बोलेको बताए। मेरो अनलाइन टिभी संग दिएको अन्तर्वार्ता ऊनले बताएका हुन्।
को हुन यि युबती ? मुख छोपेर खेल्छिन अस्लिल फिल्म
आफुलाई फसाइएको भन्ने गोरेको भिडियो सार्बजनिक ! गरे सबै खुलासा
रविको झटारो : गलतलाई गलत भन्न नसक्नेले देश बनाउने भन्दै राजनीति किन गर्ने ? ( भिडियो सहित )
मोडल एलिशा राइको धमाकेदार म्युजिक भिडियो सार्बजनिक ( हेर्नुस भिडियो मा )
Previous Article मृत्युलाई जितेर युएई जेलबाट फर्केका खड्कबहादुर मिडियामा, यस्तो रहेछ घटना ( भिडियो )
Next Article नेपालमा ‘फानी’ आँधी नआउने तर हावाहुरी र वर्षा हुने सम्भावना : मोसमविद्